Lapho umuntu enquma nje ukuziqalela amabhizinisi abo, ngokuqinisekile ukuthi ekubaleni lokhu kwakuyoba nomphumela omuhle we icala kuphela. Nokho, ngisho noma, abasebenzi zakho ziyasebenza kahle futhi ngokholo okuhle, izimo angaphandle ukushintsha isimo sibe sibi kakhulu. Ngokwesibonelo, isimo esibucayi isibe kwabaningi isizathu ukwenza inqubo enjalo i ezingemnandi njengoba ekuvalweni inhlangano engokomthetho.
Ake sibheke izindlela kungenzeka ukuvimbela kuvalwe nenkampani.
Uma ethile eyinhloko - kuba imali negative, kuyobe sekudingeka ukwenze lokho londoloza. Omunye amaphutha ezivamile abaqashi abaningi abayibheka njengebalulekile - engenangqondo ukudiliza. Iqiniso liwukuthi uma unquma hang on komunye umuntu imisebenzi emibili, ngeke ukubhekana nazo, okusho uthola yi okubi, futhi consequently'll ukusebenza ngokwalo at ukulahlekelwa. Ngakho aqale ukubeka nomunye.
Ngo amahhovisi eziningi ukukhokhela iphepha plain kuthatha Kusaphazwa imali. Nokho, izibalo zibonisa ukuthi angu-30% of the iphepha kudliwe lutho - umuntu kunyatheliswa out umugqa owodwa, okuyinto kulula ukubhala phezu sticker. Enye ukuphrinta izithombe. Eyesithathu - incwadi ... ungaqhubeka okwesikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, kukhona bakwazi, akufanele ulahle esetshenziswa kulolu hlangothi amashidi - bangase ingasetshenziswa njengendlela okusalungiswa, futhi akufanele ulahle amaphepha at ukulahlekelwa.
strong> 2. izenzakalo Corporate
Ukwenqaba ukuqhuba yenkampani akulungile futhi kubi - kodwa amaholidi anjengoKhisimusi basondele kakhulu abantu. Nokho, esikhundleni yokudlela ezibizayo, ungakhetha nesizotha more. Ukuze wenze ezifana hhayi esikhundleni ubelokhu 'yosizi "abasebenzi ngokucacile bagcine ngaphezulu izinkampani zabo zokuzalwa. Ngokwesibonelo, ake welule kwasemini at 1.5 amahora noma uvumele abantu basebenze ihora ngaphambili.
Ukuze izinsizakalo zomthetho, ukwenza izibalo bese wenze izenzo kungenzeka ngisho ekhaya. Khokha bafakele abasebenzi babo kwizinhlelo ikhaya ku-intanethi - futhi ungathumela ukuba asebenze ekhaya. Qaphela ukuthi ukubala yokususa izakhiwo. Uma ziphakeme kakhulu, kubalulekile ukwenza okuthile.
4. Ucingo izingcingo
Ngokokunye ukulinganisela, wonke umsebenzi yesithathu wenza ibhizinisi amakholi wefoni ngezinhloso siqu. Ukuze ucede le nkinga, umane ufake uhlelo lokubika - incwadi, notebook, lapho isisebenzi ngasinye ngaphambi othile akuvakashele, bhala inombolo lapho ebiza injongo ucingo futhi inani imizuzu asetshenziswa. Yiqiniso, ukukhuluma ngezinjongo siqu kuyophela.
Believe me, kukhona njalo ithuba banciphise izindleko. Kwanele ukubona zonke izinto - bese uqiniseka ukuthola izaba.
Izinguqulo ezihlukene zohlelo 1c Trade Management.